Pages: « 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » | Go Down
Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 169584 times)
Re: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ
« Reply #70 on: April 10, 2011, 04:28:08 PM »
Quote from: naka1796 on April 10, 2011, 02:12:05 PM
Quote from: thoesaung@gmail.com on April 10, 2011, 01:55:25 PM
တစ်ခါကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ အလွန်ဝါရင့်နေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမတစ်ယောက်ရှီပါတယ်
ဘယ်လောက်ထိဝါရင့်သလဲဆိုရင် နန်းတွင်းကရှိသမျှ ဘုရင်အစ တပ်မူးလေးအဆုံး
မှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် ဆုတော်ငွေ (၁၀၀၀၀၀၀) ရမည်ဟုပြောပြီး
ဒုတိယ စစ်သူကြီးကိုလွှတ်တော့လဲ စစ်သူကြီးဖြစ်ကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဘုရင်ကြီးကအကြံအိုက်သွားတာနဲ့ အနီးမှာရှီတဲ့
ထင်တာတော့ ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ တူပါမယ် ။မှန်၊မမှန်တော့ သိဘူး
ဘာသီးမှန်း သိသွားပြီပေါ့ ....
နောက်တာနော် ... ချိတ်မချိုးရဘူး .....
« Reply #71 on: April 11, 2011, 09:24:47 AM »
Quote from: anyatayar on April 08, 2011, 08:00:54 PM
Quote from: zero0 on April 08, 2011, 12:41:48 PM
LOVE ရဲ့ အရှည်/ဆိုလိုရင်းကို သိပါသလား ...
ဖြေကြည့်ကြပါဦးလို့ ... Dictionary ထဲမှာ မရှာပါနဲ့ ...
မရှိပါ ... ပေါက်ကရ မေးခွန်းလေးဖြစ်ကြောင်း .....
LOVE = Licen of Vagina Entrance
ကျွန်တော့်အမေးရဲ့ အဖြေအနေနဲ့ မှန်ကြောင်းပါဗျာ ...
License Of Vagina Entrance
ကျန်တဲ့ မေးခွန်းကိုဖြေထားသော ပညာရှင်များလည်း မှန်ကြပါတယ် ...
ဘယ်လိုပင် ယူဆယူဆ ဒါပါပဲလေ ...
အသိပညာ ဗရုတ်သုတ်ခ . အဲလေ . ဗဟုသုတများ
« Reply #72 on: April 11, 2011, 09:54:45 AM »
ဘာအသီးလဲဆိုတဲ့ အမေးနဲ့ --ခါးသီးဆိုတဲ့အဖြေကို သဘောကြပြီး ဒီပုံပြင်လေးခေါင်းထဲဝင်လာလို့ ...
ကဲ ပုံပြင်လေးစမယ် ...
´´နှုတ်မစောင့်သောလိပ်´´ ဆိုတဲ့ ပုံပြင်ကို အားလုံးကြားဖူးပြီးသားပါ ...
ဒီလိပ်ပုံပြင်ကတော့ ခေတ်မီပြီး ပြုပြင်ထားကြောင်းပါလို့ ... ဒီပုံပြင်ကို နားထောင်ခြင်း/ဖတ်ခြင်းမပြုရ ... နားထောင်ခြင်း/ဖတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက -
ဟိုရှေးရှေးတုန်းကမဟုတ်တဲ့ အချိန်တုန်းကပေါ့ ... ပတ်ကြားအက် ရေခမ်းနေတဲ့ ရေအိုင်လေးမှာ ဟိုးတုန်းကလိုပဲ လိပ်ကလေးတစ်ကောင် သေမလိုဖြစ်နေတယ် ... ဒီအချိန်မှာ ဟိုးတုန်းကလိုမဟုတ်ဘဲ (ဟင်္သာမောင်နှံမဟုတ်ဘဲ) ဟင်္သာဖိုတစ်ကောင်ဟာ အစာရှာဖွေရင်း အဲဒီ့လိပ်ကိုတွေ့တယ် ... လိပ်ဘေးနားကိုဆင်းသက်ပြီး -
ဟင်္သာ= အဆွေလိပ် .. ဒုက်ခရောက်နေပြီပေါ့ ... ဟိုးတုန်းကလိုပဲ အဆွေလိပ်ကို မောင်နှံစုံနဲ့ တုတ်ကလေးကို ကိုက် . အဆွေက တုတ်အလယ်ကကိုက်ပြီး ရေအိုင်တစ်အိုင်ဆီကို ခေါ်သွားချင်ပေမယ့် အခုတော့ အဲဒီလို လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ် ...
လိပ်= ရပါတယ် အဆွေ ... သင့်နဲ့ သင့်အမျိုးနွယ်တွေကို ကျေးဇူးတင်နေလျက်ပါ ...
ဟင်္သာ= ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် . သင့်ကို ကယ်တင်ချင်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းကလို ကယ်ဖို့အဆင်မဖြေဘူး ... ကဲ . ဒိလိုလုပ်ကြရအောင် ... ငါ့ကိုယ်ပိုင်တုတ်တော့ရှိတယ် ... ဒါကြီးကို ကိုက်ပြီး လိုက်ခဲ့ပါ ... ရေအိုင်တစ်အိုင်ဆီကို သင့်ကို ခေါ်ဆောင်သွားပါမယ် ...
လိပ်= (စဉ်းစားခန်းဝင်သည်။) (အင်းလေ . အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ ဒီလိုပဲ လုပ်ရတော့မှာပေါ့)
ကောင်းပါပြီ ... အသင့် အစီစဉ်အတိုင်း လုပ်ကြတာပေါ့ ...
ဒီလိုနဲ့ပဲ လိပ်က ဟင်္သာရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တုတ်ကို ကိုက်ပြီး ပါလာတယ် ... ရေအိုင်တစ်အိုင်ဆီရောက်တော့ ဟင်္သာက လိပ်ကို အဲဒီရေအိုင်မှာ နေဖို့ပြောပြီး ချပေးမလို့လုပ်တယ် ... အဲ . ဒါပေမယ့် လိပ်က မရှိတော့ဘူး ... ဟင်္သာက ´´ လုပ်ပြန်ပြီ ... ဘယ်နေရာမှာ ကျကျန်ခဲ့ပါလိမ့် ´´ လို့ဆိုပြီး လာခဲ့ရာလမ်းအတိုင်း ပြန်ရှာတယ် ... ထုံးစံအတိုင်းပဲလေ ... နှုတ်မစောင့်တော့ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့တာပေါ့ ...
တစ်နေရာရောက်တော့ တွေပါလေရော ... လိပ်ကလေးက ပညာရှိယုန်ကြီး ပြောတဲ့ပုံပြင်ကို နားထောင်/ဖတ်နေတယ်လေ ... ဟင်္သာလည်း စိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့ ...
´´ သြော် . လက်ဆက်သက်တော့ ငါ့တုတ်ကို ကိုက်ပြီး လိုက်လာတဲ့သူက အခု ပုံပြင်ကို နားထောင်/ဖတ်နေတာကိုး´´ လို့ ဟင်္သာကတွေးလိုက်သတဲ့ ...
ပုံပြင်ကတော့ ဒီလောက်လေးပါပဲကွယ် ... အားလုံးပဲ နားထောင်/ဖတ်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ ...
အားလုံးကို ပျော်ရွှင်စေပါကြောင်း .....
« Reply #73 on: April 11, 2011, 10:24:35 AM »
တံတားတစ်စင်းရှိတယ် ... အဲဒီ့တံတားက လူတစ်ယောက်နဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးအတွက်ပဲ ခံနိုင်ဝန်ရှိတယ် ... ကိုက်တစ်ထောင်လောက်ရှည်တယ် ...
တံတားရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ သင့်ကောင်မလေးရှိတယ် ... သင်က ဒီဖက်ခြမ်းမှာပေါ့ ... ပန်းသီးတွေလည်း သင့်ဘေးမှာ အများကြီးရှိတယ် ... သင့်ကောင်မလေးက ဟိုဖက်ခြမ်းကနေလှမ်းအော်တယ် ... ´´ကိုကိုမောင်မောင်အန်ကယ်ရေ . ချော်ကီလေးအတွက် ပန်းသီး နှစ်လုံးယူခဲ့ပေးပါ ... မြန်မြန်လေးနော် ´´ ...
ကဲ . သင့်ကောင်မလေးအတွက် ပန်းသီးနှစ်လုံးကို ဒီတံတားပေါ်ကဖြတ်ပြီး ဘယ်လိုသယ်ယူမလဲ ... သင့်ကောင်မလေးက မြန်မြန်လာဖို့ . ပန်းသီးနှစ်လုံးပါ ယူလာဖို့ တောင်းဆိုနေပြီ ... ချော်ကီလေးအတွက် သင့်စွမ်းရည်ကို ပြသလိုက်ပါတော့လား ...
စဉ်းစားရင်း မေးခွန်းလေးကိုဖြေပါ .....
« Reply #74 on: April 11, 2011, 11:56:24 AM »
အသီးတော့ အသီးပဲ ... ဒါပေမယ့် စားလို့မရဘူး ... ဘာအသီး(များ)ဖြစ်မလဲ ...
အသီးဆိုရင် မီးသီးကို မစားဘူး ...
အရွက်ဆိုရင် တံခါးရွက်ကို မစားဘူး ...
အသားဆိုရင် သစ်သားကို မစားဘူး ...
« Reply #75 on: April 11, 2011, 01:30:07 PM »
Quote from: charchar on April 06, 2011, 02:58:32 PM
အဲလာ ၀မ်းသွားတာ ......
အခြောက်တွေသည်လည်း ရာသီ(ဘယ်လိုယဉ်ကျေးအောင်သုံးရမလဲဆိုတာ မသိလို့ .. ဒီလိုပဲသုံးလိုက်ပါတယ် ... ရိုင်းပြသွားရင် ခွင့်လွှတ်/နားလည်ပေးပါဗျာ ...)လာတဲ့ အချိန် ရှိတယ်တဲ့ ...
ဟုတ်ပမလား ... ဟုတ်ရင် - ဘယ်လို/ဘာကြောင့် အဲဂလို ဖြစ်ရတာလဲ ...
ဒါကိုဖြေတာဆိုရင်တော့ မှန်ပါတယ် ...
ဖိုရမ်အကူး ပြဿနာကင်းအောင် နာမည်ပြောင်း
« Reply #76 on: April 11, 2011, 02:06:55 PM »
Quote from: zero0 on April 11, 2011, 10:24:35 AM
ပန်းသီးနှစ်လုံး ယူလာလို့ ရတာပေါ့ ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဇက်တော့ တော်တော်ညောင်းမလားပဲ။ တစ်လုံးကို မြှောက်တင်လိုက်၊ ပြန်ကျလာရင် နောက်တစ်လုံးကို ထပ်မြှောက်ပြီး ပြန်ကျလာတာကို ဖမ်း၊ ဒီလိုနဲ့ တံတားဆုံးအောင်လျှောက်သွားလို့ ရတာပေါ့။
ကောင်မလေးကို ပန်းသီးပေးပြီး ပန်းသီးယူလို့ရပြီပေါ့ ...
ခေါင်းရှောင်သူ = Redirector = Read တာနဲ့ Write တာ။ R/W ပေါ့ဗျာ ...
« Reply #77 on: April 11, 2011, 07:49:47 PM »
ကောင်မလေးကို ပန်းသီးပေးပြီး ပန်းသီးယူလို့ရပြီပေါ့ ... Tongue
Share this topic on AskShare this topic on FacebookShare this topic on GoogleShare this topic on MySpaceShare this topic on NetvouzShare this topic on TwitterShare this topic on YahooShare this topic on Google buzz
ကိုredirectorရေ တံတားပေါ်ကပြုတ်ကျရင်ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဗျ
« Reply #78 on: April 11, 2011, 08:33:43 PM »
« Reply #79 on: April 12, 2011, 12:11:39 AM »
Pages: « 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » | Go Up
Tags: Funny Quiz Funny Puzzle ဖြေပေးကြပါ